Usoro na ọnọdụ - Mora Racing Wolfgang Mohr
Usoro izugbe na ọnọdụ ya na ozi ndị ahịa
Mmechi nke nkwekọrịta
Ọnọdụ mbubata na mbupu
Ikike nke adịghị ike (akwụkwọ ikike)
Mgbapụta onyinye tiketi
Iwu etinyere ya
Mkpebi mgbagha ọzọ
1.1 Usoro na ọnọdụ ndị a (nke ugbu a "GTC") nke Wolfgang Mohr, na-eme n'okpuru "Mora-Racing" (nke a "onye na-ere ahịa"), na-etinye aka na nkwekọrịta niile maka nnyefe nke ngwongwo nke onye ahịa ma ọ bụ onye ọchụnta ego (nke a "onye ahịa") Ndi na ere ahia banyere ahia ndi gosiputara na shop ya. Ntinye nke ọnọdụ nke onye ahịa na-emegide ya, belụsọ ma ekwetaghị ya.
1.2 Usoro ndị a na-emetụta nkwekọ nkwekọrịta maka nnyefe nke ndepụta ego, belụsọ na ekwuputara n'ụzọ ọzọ.
1.3 Onye ahia n’ime ihe usoro na onodu a putara bu ihe mmadu obula n’emechu ahia banyere ebum n’uche ndi n’adighi azu ahia ma obu ndi oru aka ha noro. Onye ọchụnta ego n'ime usoro nke usoro a bụ onye okike ma ọ bụ onye iwu ma ọ bụ mmekorita iwu nke, mgbe ọ na-emechi azụmahịa, na-egosipụta ọrụ azụmaahịa ma ọ bụ nke onwe ha.
2) Mmechi nke nkwekọrịta
2.1 Nkọwapụta ngwaahịa ndị dị na ụlọ ahịa n'ịntanetị nke ndị na-ere ere anaghị anọchite anya onyinye na-enye aka na akụkụ nke onye na-ere ahịa, kama na-enyefe onyinye nke ndị ahịa nyere.
2.2 Onye ahịa ahụ nwere ike ịnye onyinye ahụ site na iji usoro ịntanetị jikọtara na ụlọ ahịa n'ịntanetị nke ndị na-ere ahịa. Mgbe ịtinye ngwongwo ndị ahọpụtara na ụgbọ ahịa ịzụ ahịa mebere ma na-aga n'usoro ịtụ ahịa eletrọniki, onye ahịa ahụ nyefere nkwekọrịta nkwekọrịta iwu kwadoro maka ngwongwo na ụgbọ ibu azụmahịa site na ịpị bọtịnụ nke mechiri usoro ịtụ ahịa. Onye ahịa ahụ nwekwara ike ịnye onye na-ere ya onyinye site na ekwentị, email, post ma ọ bụ ụdị kọntaktị n'ịntanetị.
2.3 Onye na-ere ere nwere ike ịnabata onyinye ndị ahịa n'ime ụbọchị ise,
site na iziga onye ahịa ihe nkwenye ederede ede ma obu nkwenye ya na ederede ederede (faksị ma ọ bụ email), ebe nnata nke nkwenye ahụ sitere n'aka onye ahịa ahụ bụ mkpebi dị mkpa, ma ọ bụ
site na ibuga ngwa ahịa ahụ enyere onye ahịa ya, ebe nke ịbanye na ngwongwo ndị ahịa dị mkpa, ma ọ bụ
site n’ịrịọ onye ahịa ka ọ kwụọ ụgwọ mgbe o debere iwu ya.
Ọ bụrụ na usoro ndị ọzọ e kwurula na mbụ dị, nkwekọrịta ahụ ga-akwụsị n'oge ahụ otu n'ime ụzọ ndị ọzọ e hotara na mbụ ga-ebu ụzọ mee. Oge ịnakwere onyinye ahụ na-amalite ụbọchị mgbe onye ahịa zitere onyinye ahụ ga-agwụ na njedebe nke ụbọchị nke ise na-eso nnabata. Ọ bụrụ na onye na-ere ahia anaghị anabata onyinye onye ahịa ahụ nyere tupu oge ahụ anyị kwuru, a na-ewere nke a ka ọ bụrụ onyinye ahụ, ebe nsonaazụ ya enweghịzi ike ikwupụta nzube ya.
2.4 Ọ bụrụ na ahọrọ usoro ịkwụ ụgwọ "PayPal Express", ndị na-ahụ maka ịkwụ ụgwọ PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nke a ga - esote: "PayPal"), ga - edozi ụgwọ ahụ. - Usoro ojiji, dị na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full ma ọ bụ - ọ bụrụ na onye ahịa enweghị akaụntụ PayPal - n'okpuru ọnọdụ maka ịkwụ ụgwọ na-enweghị akaụntụ PayPal, enwere ike ilele ya anya https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Ọ bụrụ na onye ahịa ahọpụtara "PayPal Express" dị ka usoro ịkwụ ụgwọ n'oge usoro ịntanetị, ọ na-enyekwa ego ịkwụ ụgwọ PayPal site na ịpị bọtịnụ nke mechiri usoro ịtụ. N'okwu a, onye na-ere ahịa ekwupụtala nnabata nke ndị ahịa na oge nke onye ahịa na-ebute usoro ịkwụ ụgwọ site na ịpị bọtịnụ nke mezue usoro iwu.
2.5 Mgbe ị nyefere onyinye site na mpempe akwụkwọ n'ịntanetị nke onye na-ere ahịa, ederede nke nkwekọrịta ahụ na-echekwa ya n'aka onye na-ere ahịa mgbe emechara nkwekọrịta ahụ ma zigara ndị ahịa na ụdị ederede (dịka e-mail, faksị ma ọ bụ leta) mgbe onye ahịa zitere iwu ya. Onyinye ọ bụla ọzọ nke ederede nkwekọrịta ahụ na-ere ere anaghị ewere ọnọdụ. Ọ bụrụ na onye ahịa ahụ edozila akaụntụ onye ọrụ na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị tupu ị nyefee iwu ya, a ga-edebe data iwu na weebụsaịtị nke onye na-ere ahịa ma nwee ike ịnweta ya n'efu site n'aka onye ahịa site na akaụntụ njirimara echekwara paswọọdụ site na ịnye data nbanye kwekọrọ.
2.6 Tupu ntinye ntinye nke usoro site na ụdị ahịa ịntanetị nke onye na-ere ere, onye ahịa nwere ike ịchọpụta njehie ntinye ọ ga-ekwe omume site na iji nlezianya gụọ ozi gosipụtara na ihuenyo ahụ. Teknụzụ dị irè iji nweta mmata kacha mma nke njehie ntinye nwere ike ịbụ ọrụwanye nke ihe nchọgharị ahụ, site na enyemaka nke a na-ebuwanye ihe nnọchianya na ihuenyo ahụ. Onye ahịa ahụ nwere ike idozi ihe ndenye ya dị ka akụkụ nke usoro ịhazi kọmputa site na iji keyboard na ọrụ arụ ọrụ ruo mgbe ọ pịa bọtịnụ nke mechiri usoro ịtụ.
2.7 Asụsụ German na Bekee dị maka njedebe nke nkwekọrịta ahụ.
2.8 Nhazi nhazi na kọntaktị na-arụkarị site na email na nhazi usoro akpaaka. Onye ahịa ahụ kwesiri ịgba mbọ hụ na adreesị ozi-e nke enyere ya iji hazie usoro a ziri ezi ka e wee nata ozi-e nke onye na-ere ahịa zigara na adreesị a. Karịsịa, mgbe ị na-eji ihe nzacha SPAM, onye ahịa ga-enwerịrị ike ịnweta ozi ịntanetị niile nke onye na-ere ma ọ bụ nke ndị ọzọ nyere ọrụ na nhazi iji nyefee.
3) Ikike mwepu
3.1 Ndị na-azụ ahịa n'ozuzu nwere ikike iwepụ.
3.2 Enwere ike ịchọta ozi ọzọ n'aka nri nke ndọrọ ego na iwu ịkagbu iwu.
4) Ahịa na usoro ịkwụ ụgwọ
4.1 Ọ gwụla ma edepụtara ya na nkọwapụta nke onye na-ere ahịa, ọnụ ahịa ndị e nyere bụ ọnụahịa zuru ezu gụnyere ụtụ isi nke iwu. Ọ bụla nnyefe ọ bụla na ụgwọ mbupu nke nwere ike ịbụ na-akọwapụtara iche iche na nkọwa ngwaahịa ahụ.
4.2 N'ihe banyere inyefe mba ndị na-abụghị European Union, ụgwọ ndị ọzọ nwere ike ibilite nke ndị na-ereghị ego na ndị ahịa ga-ebu. Ndị a gụnyere, dịka ọmụmaatụ, ụgwọ nke ịnyefe ego site n'aka ụlọ ọrụ akwụmụgwọ (dịka ụgwọ mbufe, ụgwọ ọnụego mgbanwe) ma ọ bụ ọrụ mbubata ma ọ bụ ụtụ isi (wdg. Ọrụ ụtụ isi). Costsgwọ dị otú ahụ nwekwara ike ibilite n'ihe metụtara inyefe ego ma ọ bụrụ na enyeghị nnyefe na mba na-abụghị European Union, mana onye ahịa ahụ na-akwụ ụgwọ site na mba na-abụghị European Union.
4.3 Nhọrọ ịkwụ ụgwọ (s) ga-agwa ndị ahịa na ụlọ ahịa na-ere ahịa n'ịntanetị.
4.4 Ọ bụrụ na ekwenyela ịkwụ ụgwọ site na mbufe ụlọ akụ, ịkwụ ụgwọ ga-akwụ ụgwọ ozugbo ngwụsị nke nkwekọrịta ahụ, belụsọ na ndị ọzọ ekwenyela ụbọchị ọzọ.
4.5 Mgbe ị na-akwụ ụgwọ site na usoro ịkwụ ụgwọ nke PayPal nyere, ndị na-ahụ maka ịkwụ ụgwọ PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nke a: "PayPal"), n'okpuru PayPal - Usoro ojiji, dị na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full ma ọ bụ - ọ bụrụ na onye ahịa enweghị akaụntụ PayPal - n'okpuru ọnọdụ maka ịkwụ ụgwọ na-enweghị akaụntụ PayPal, enwere ike ilele ya anya https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.
4.6 Ọ bụrụ na a họpụtara usoro ịkwụ ụgwọ "PayPal Ebe E Si Nweta" (ịkwụ ụgwọ na ntinye aka site na PayPal), onye na-ere ahịa na-ekenye PayPal ịkwụ ụgwọ ya. Tupu ịnakwere nkwupụta nke onye na-ere ahịa banyere ọrụ, PayPal na-eme nyocha ego site na iji data ndị ahịa nyere. Onye na-ere ahia nwere ikikere ịjụ ndị ahịa usoro ịkwụ ụgwọ "PayPal Ebe E Si Nweta" ma ọ bụrụ na nsonaazụ ule na-adịghị mma. Ọ bụrụ na usoro ịkwụ ụgwọ "PayPal Ebe E Si Nweta" kwadoro na PayPal, onye ahịa ga-akwụ ụgwọ akwụkwọ ọnụahịa ahụ dịka PayPal si dị ka ọnọdụ nke onye na-ere ahịa kwuru, nke a gwara ya na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. N'okwu a, ọ nwere ike ịkwụ ụgwọ PayPal naanị ụgwọ iji ụgwọ. Agbanyeghị, ọbụlagodi n'ihe gbasara ịnye ọrụ, onye na-ere ahịa ahụ ka ga-aza ajụjụ maka ajụjụ ndị ahịa iz. B. na ngwongwo, oge nnyefe, izipu, nloghachi, mkpesa, nkwuputa nkwupụta na izipu ma ọ bụ ndetu kredit.
4.7 Ọ bụrụ na ịhọrọ otu n'ime usoro ịkwụ ụgwọ nke ọrụ ịkwụ ụgwọ "Shopify Payments", a na-ahazi ịkwụ ụgwọ ahụ site n'aka ndị na-eweta ọrụ ịkwụ ụgwọ Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ireland (nke a bụ "Stripe"). A na-agwa ndị ahịa na usoro ịkwụ ụgwọ onye ọ bụla a na-enye site na ịkwụ ụgwọ Shopify. Iji hazie ịkwụ ụgwọ, Stripe nwere ike iji ọrụ ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ, nke ọnọdụ ịkwụ ụgwọ pụrụ iche nwere ike ịdị, nke ndị ahịa nwere ike ịgwa ya iche. Ozi ndi ozo banyere "Shopify Payments" dị na atntanetị na https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.
4.8 Ọ bụrụ na ịkwụ ụgwọ usoro “PayPal akwụkwọ ọnụahịa” họrọ, na-ere ere ekenye ya ịkwụ ụgwọ na-ekwu PayPal. Tupu ịnakwere nkwupụta nke onye na-ere ahịa banyere ọrụ, PayPal na-eme nyocha ego site na iji data ndị ahịa nyere. Onye na-ere ahia nwere ikike ịjụ ndị ahịa usoro ịkwụ ụgwọ "PayPal invoice" ma ọ bụrụ na nsonaazụ ule na-adịghị mma. Ọ bụrụ na usoro ịkwụ ụgwọ “PayPal invoice” kwere site na PayPal, onye ahịa ga-akwụ ụgwọ ọnụahịa ahụ na PayPal n’ime ụbọchị iri atọ nke nnata ngwaahịa ahụ, belụsọ na PayPal ekwuola okwu ịkwụ ụgwọ dị iche. N'okwu a, ọ nwere ike ịkwụ ụgwọ PayPal naanị na ụgwọ iji ụgwọ. Agbanyeghị, ọbụlagodi n'ihe gbasara ịnye ọrụ, onye na-ere ahịa ahụ ka ga-aza ajụjụ maka ajụjụ ndị ahịa iz. B. na ngwongwo, oge nnyefe, izipu, nloghachi, mkpesa, nkwuputa nkwupụta na izipu ma ọ bụ ndetu kredit. Tụkwasị na nke ahụ, Usoro Ojiji Izugbe maka iji ịzụta na akaụntụ sitere na PayPal na-etinye, nke a ga-elele na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms.
4.9 Ọ bụrụ na a họpụtara usoro ịkwụ ụgwọ "PayPal direct debit", PayPal ga-anakọta akwụkwọ ọnụahịa ahụ na akaụntụ akụ nke onye ahịa mgbe enyerela ikike iwu ịkwụ ụgwọ SEPA, mana ọ bụghị tupu oge a kara aka maka ozi mbu na nnọchite nke onye na-ere ya. Nkwupụta bụ nkwukọrịta ọ bụla (dịka akwụkwọ ọnụahịa, amụma, nkwekọrịta) nye ndị ahịa na-ekwupụta nkwụcha ụgwọ site na nkwụnye ego SEPA. Ọ bụrụ na agbapụtaghị ụgwọ ụgwọ kpọmkwem n'ihi ego na-ezughi oke na akaụntụ ahụ ma ọ bụ n'ihi ịnye nkọwa akụ na-ezighi ezi, ma ọ bụ ọ bụrụ na onye ahịa ahụ jụrụ itinye ego, ọ bụ ezie na o nweghị ikike ime nke a, onye ahịa ga-ebu ebubo nke ụlọ akụ dị iche iche kpatara ma ọ bụrụ na ọ bụ ọrụ maka nke a .
5) Nzipu na ọnọdụ mbupu
5.1 Mbupu nke ngwongwo na-ewere ọnọdụ na ụzọ izipu ozi na adreesị nnyefe nke onye ahịa kwupụtara, belụsọ ma ekwetaghị ya. Mgbe ị na-azụ ahịa ahụ, adreesị nnyefe e nyere na nhazi nke onye na-ere ahịa dị oke mkpa.
5.2 A na-anapụta ngwongwo nke onye na-ebugharị ebugharị na-akwụghị ụgwọ "ntụgharị n'efu", yabụ ruo n'akụkụ ihu ọha nke dịkarịrị nso na adreesị nnyefe ahụ, belụsọ na ekwuru n'ụzọ ọzọ na ozi mbupu na ụlọ ahịa n'ịntanetị nke onye na-ere ahịa yana belụsọ ma ekwetaghị.
5.3 Ọ bụrụ na nnyefe nke ngwongwo ada n'ihi ihe ndị ahịa ji kpatara ya, onye ahịa ga-akwụ ụgwọ ezi uche dị na ya nke onye na-ere ya. Nke a emetụtaghị gbasara ụgwọ mbupu ma ọ bụrụ na onye ahịa gosipụtara ikike ọpụpụ ya nke ọma. Maka nkwụghachi ụgwọ, ọ bụrụ na onye ahịa gosipụtara ikike ya nke ịkagbu ya nke ọma, ndokwa emere na iwu kagbuo onye na-ere ahịa na-emetụta.
5.4 N'ihe banyere ịnakọta onwe onye, ​​onye na-ere ahịa na-ebu ụzọ gwa onye ahịa ahụ email na ngwongwo ọ nyere iwu dị njikere maka nnakọta. Mgbe ị natara e-mail a, onye ahịa ahụ nwere ike ịnakọta ngwongwo ahụ site n'isi ụlọ ọrụ onye na-ere ahịa mgbe ya na onye na-ere ya kwurịtara. N'okwu a, agaghị akwụ ụgwọ ụgwọ mbupu.
5.5 A na-enye ndị ahịa ego ndị ahịa dị ka ndị a:
site na nbudata
site na email
site na post
6) Ndobe nke aha
Ọ bụrụ na onye na-ere ahia na-akwụ ụgwọ tupu oge eruo, ọ ga-echekwa ihe ndị ọ dọbara ruo mgbe ọ kwụrụ ụgwọ ịzụrụ ụgwọ zuru ezu.
7) Ikikere nke mmebi (ikike)
7.1 Ọ bụrụ na ihe a zụrụ nwere ntụpọ, ndokwa nke iwu kwadoro maka nrụrụ dị.
7.2 A na-agwa onye ahịa ahụ ka ọ kpesaara onye mgbapụta ahụ banyere ngwongwo a napụtara na mbibi ụgbọ njem doro anya yana gwa ndị na-ere ya ihe a. Ọ bụrụ na onye ahịa anaghị asọpụrụ, nke a enweghị mmetụta na iwu ya ma ọ bụ nkwupụta nkwekọrịta ya maka ntụpọ.
8) Mgbapụta onyinye onyinye
8.1 Kupọns ego ndị enwere ike ịzụta site na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị nke ndị na-ere ahịa (nke ugbu a "onyinye onyinye") enwere ike ịgbapụta na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, belụsọ ma ekwuru na akwụkwọ ego ahụ.
8.2 Onyinye onyinye na ego fọdụrụnụ nke onyinye onyinye nwere ike ịgbapụta site na njedebe nke afọ nke atọ na-esote afọ nke eji azụrụ ego ahụ. A ga-akwụnye ụgwọ ndị fọdụrụnụ na ndị ahịa ruo ụbọchị mmebi.
8.3 Enwere ike ịgbapụta onyinye ego naanị tupu usoro edechara ya. Billgba ụgwọ na-esote agaghị ekwe omume.
8.4 Naanị otu akwụkwọ onyinye ka enwere ike gbapụta kwa usoro.
8.5 Enwere ike iji ego onyinye naanị zụta ngwongwo na ịghara ịzụta ihe onyinye onyinye ọzọ.
8.6 Ọ bụrụ na ọnụ ahịa nke onyinye onyinye ezughi oke iji kpuchie iwu ahụ, otu n'ime ụzọ nkwụnye ụgwọ ndị ọzọ nke onye na-ere ahịa nwere ike ịhọrọ iji dozie ọdịiche ahụ.
8.7 Akwụghị ego nke onyinye onyinye na ego ma ọ bụ akwụ ụgwọ ọmụrụ nwa.
8.8 A na-enyefe onyinye ego. Onye na-ere ere nwere ike iji mmesapụ aka kwụọ ụgwọ maka onye nwe ya na-agbapụta ego onyinye na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. Nke a anaghị emetụta ma ọ bụrụ na onye na-ere ahia nwere ihe ọmụma ma ọ bụ amaghị ihe ọfụma nke enweghị ikike, ikike iwu ma ọ bụ enweghị ikike nke onye nwe ya.
9) Iwu ọdabara
Iwu nke Federal Republic of Germany na-emetụta mmekọrịta iwu n'etiti ndị otu a, ewezuga iwu gbasara ịzụta ngwongwo mba ụwa. Maka ndị na-azụ ahịa, ụdị iwu a na-emetụta naanị na ebe nchekwa enyereghị ikike nke iwu steeti nke ndị ahịa ya bi na ya.
10) Mkpebi mgbagha ọzọ
10.1 EU Commission na-enye ikpo okwu maka mkpebi esemokwu n'ịntanetị n'okpuru njikọ ndị a: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Ikpokoro a na-abụ ebe kọntaktị maka idozi ụlọ ikpe na-enweghị nsogbu na-esite na azụmaahịa n'ịntanetị ma ọ bụ nkwekọrịta ọrụ nke onye ahịa.
10.2 Iwu ejighi onye na-ere ahia ma ọ bụ dị njikere isonye na usoro mmezi esemokwu n'ihu ụlọ ikpe mkpezi nke ndị na-azụ ahịa.